Raha mitombo +2°C ny maripana: “Ho faty ny 25%-n’ny biby eto Madagasikara”, hoy ny WWF | NewsMada
Raha mitombo +2°C ny maripana: “Ho faty ny 25%-n’ny biby eto Madagasikara”, hoy ny WWF
Tsy ahafahana miaro ny biby sy ny zavaboahary ny famerana ny hafanan’ny toetr’andro ho 2°C, araka ny fanamby nataon’ny firenena tsirairay avy. “Tokony tsy hihoatra ny 1,5°C ny fitomboan’ny maripana, vao azo antoka fa tsy ho ringana ny biby, na ny zava-mananaina eto ambonin’ny tany”, hoy ny WWF.
Namoaka tatitra siantifika ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny tontolo iainana, WWF, ny marsa 2018 teo, mitondra ny lohateny hoe : “ny fiainan-dia ao anatin’ny tontolo mihamafana”. Nambarany tao fa “tsy ho zakan’ny 25%-n’ny biby eto Madagasikara raha ferantsika ho 2°C ny fitomboan’ny maripana eto an-tany, ka ho ringana tanteraka izy ireo amin’ny taona 2080”.
Nivory tany Korea Atsimo ny Vondron’ny manampahaizana iraisan’ny governemanta mikasika ny fivoaran’ny toetr’andro (GIEC), ny herinandro lasa teo. Naroso nandritra io fivoriana io ny vokatry ny fanadihadiana avy amin’ny karazany 6.000, mikasika ny fiantraikan’ny fiovaovan’ny toetr’andro eto ambonin’ny tany. Voakasik’izany ny hamerana ny fiakaran’ny maripana tsy hihoatra ny 1,5°C raha 2°C ny toromarika napetraka.
Tsy ampy ny toky hamerana tsyhihoatra ny 1,5°C
Miisa 135 ny solontenan’ny governemanta maneran-tany, nandray anjara tamin’ity fivoriambe tany Korea Atsimo ity. Nankatoavin’izy ireo ny tatitra, hampihenana ny fetra fiakaran’ny maripana tsy hihoatra ny 1,5°C. Nambaran’i Stephen Cornelius, mpanolotsaina mikasika ny toetr’andro ao amin’ny WWF, fa “faly izahay satria tsapa tokoa fa tena nandinika lalina ny lafiny siantifika ireo solontenan’ny governemanta nandray anjara tamin’ity fivoriana ity. Na izany aza, tsy ampy hamerana ny maripana tsy hihoatra ny 1,5°C ny toky nomenareo firenena isanisany satria tsy ahafahanareo manohitra ny lalàn’ny siansa izany”.
Dikany, mila ezaka maro ny firenena tsirairay, sady manova ny fomba hiarovany ny tontolo iainana tsy hampiakatra ny hafanan’ny toetr’andro, fa tsy vitan’ny manome toky ambony latabatra fotsiny.